The masaf qarsoon CPA 2.0 : Sida loo abuuro Your masaf First - Masaf Of The Day
The masaf qarsoon CPA 2.0 : Sida loo abuuro Your masaf First
Sida loo abuuro masaf CPA Taasi Taliyaha Guud ee Sales Kolkiiba
Hi Francis halkan mar kale aad baad u mahadsan tahay, waayo, celintaada. Oo sida halkan Yaboohay waa tallaabo hagitaan talaabo talaabo si ay u dhisaan aad ugu horeysay Qarsoon CPA masaf.
Had iyo jeer halkan si aad u maqli wuuna idin qiimeeyaa. Sidaas daraaddeed ha ka welwelin waqti aad igala soo xiriiri kartaa [email protected]
Reminding : Waxaad u baahan tahay ka dib markii qalabka si ay u abuuraan aad masaf
site A (magaca domain) iyo / ama clickfunnel
3 si ay u 4 CPA dalabyo
Top The 7 Talaabooyinka Si Dhis masaf First
Halkan waxa soo socda talaabooyin si aad u naftaada dhisi
Hel domains on namecheap
Connect domains in xisaabta aad martigelin
Dhis masaf ah
Connect domains aad Clickmagic
Connect Rotator iyo masaf
Ku dar dalabyo galay Clickmagic
Bilow ololaha gaadiidka aad
waxaan soo iibsaday 2 domains (mid ka mid ah goobta ugu muhiimsan oo kale clickmagic sida domain rotator). Waxay ku kacaysaa oo kaliya $5.76 maxaa yeelay, i doonayaa inaan for .me
Connect Domains Si Your Account Hosting
Waxaan la isticmaalayo hostnine inay marti aan domain. Taasi waa sababta aan u leeyihiin in ay bedeli server magaca domain halkan.
La xiriir shirkadda martigelin haddii aadan aad u ogaato sida loo sameeyo ama si fudud u weydiiso in aad DNS. Waxay kaa caawin doonaan in ay farta aad domain in server adiga kuu gaar ah.
Markaasaa tag Cpanel in aad ku dar aad domain waxaa.
Waxaad wax ka heli doonaa sida haddii aad si sax ah u sameeyey
Hambalyo. Haddaba waxaad u baahan tahay si loo soo dajiyo WordPress on in brand domain cusub. Ha welwelin, very easy or you can go to Youtube and search for « how to install wordpress »
Marka halkan dhameystirtay waa natiijada.
Dhis masaf The
Ka dib markii in aad leedahay si loo soo dajiyo Instabuilder haddii aadan tegi doonaa iyadoo clickfunnels. Raac tallaabooyinka hoose si aad u rakibi plugin this (Ma lacag la'aan)
Markaas waxaad si aad u dhaqaajiso iyo geliso liisanka sida aan ku sameeyey.
xaq All. Haddaba waxaad isticmaali Instabuilder ama CLickfunnel in si sax ah loo abuuro 4 pages like the ones below :
Ma doonayo inaan in ay ku tusaan sida loo dhiso, maxaa yeelay, waxaad isticmaali kartaa ay tutorial u gaar ah in sidaas la sameeyo. Oo ma koobi sax ah erey-erey wixii aan ku sameeyey.
Connect Domain Si Your Account Clickmagic
Xulo domain labaad, waxaan soo iibsaday. Taasi waa mid ka mid ah aan u isticmaalno doonaa Clickmagic.
Add www.clkmr.com. Wher you have the red bar. waxa aan kaliya idin siiyey beddel xogta hore waxaa. And you go to your Clickmagic account :
Guji Tools / Manager Domain iyo dar aad domain labaad waxaa sida aan ku sameeyey. Eeg sawirka kor ku xusan.
Then you have to create your rotator : riix kadibna Rotators / Abuur New Rotator foomka foomka buuxin sida aan ku sameeyey.
Waxaad mar walba isticmaali kartaa qaybta Help, haddii aadan aqoon sida loo sax ah u qaban. 🙂
jaallahay Si wanaagsan baad yeeshay.
Connect Rotator Oo masaf
Runtii ugu faraxsanahay oo idinka mid ah, maxaa yeelay, waxaad u sameeyey. No by reading this qayb laakiin by talaabo ilaa halkan. Waxaad mudan yihiin guusha iyo aad u fog aadan.
Haddaba nuqul aad link rotator kaliya idin abuuray oo tag paste in aad masaf
Paste aad link hoos button garoomada ka dib markii pages
Ku dar offfers galay Clickmagic
Dhamaan inaad hadda samayso waa in aad is geliso aad CPA bixisaa in aad rotator Clickmagic oo uma baahnid in aad taaban wax aad masaf.
Haddii dalab dhinto, aad si toos ah bedeli in clickmagic aan ku jira masaf.
Halkan waxaa ku CPA bixisaa waxaan ka network Maxbounty doortay.
Ugu dambayntiina aad tahay tallaabada xigta waa in la wado gaadiidka weyn in aad masaf, nasato oo arag lacag duudduuban in aad xisaabta.
Sidaas ... mar kale , haddii aad dareemay laga badiyay, kaliya ila soo xiriir. Waxaan halkaan u joogaa inaan caawiyo.
Ha iloobin in aad aad kala soo bixi masaf dfy.
Create aad xisaabta halkan haddii aadan haysan mid ka mid
waxaa Download halkan.
I ogaysii haddii aad qabto wax su'aalo ah.
Masaf ee Kooxda maalintii